စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ: ချစ်သူထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Home ကဗျာ ချစ်သူထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ချစ်သူထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Post under ကဗျာ at 2/22/2010 08:40:00 PM Posted by k2m
အိပ်မရတဲ့ ညအသင်္ချေတွေမှာ ငါ့အိပ်ယာတွေ တွန့်ကြေ…. ငါငိုနေရပြီ…. ငါ့နှလုံးသားရဲ့ငိုရှိုက်သံက လှိုက်သံတွေနဲ့အက်ကွဲနေတော့…နင်သဲသဲကွဲကွဲကြားနိုင်မယ်မထင်ဘူး….ကြယ်လေးတွေကိုမေးကြည့်ပါ..ငါငိုနေတာသူတို့အသိဆုံးပါ….ငါ့ငိုချင်းမှာ..တင်းမခံနိုင်တဲ့ကြယ်လေးတွေကြွေကျကုန်ပြီ..ချစ်သူ….ကြယ်တွေဘယ်လိုကြွေကြွေ..ဘယ် ကြယ်တွေဘယ်လိုလှလှ..ငါ့ဘ၀ရဲ့လမင်းဟာ..နင်ပါ..လရောင်မဖျန်းလို့မပွင့်လန်းနိုင်တဲ့ကုမုဒြာဟာ…ငါ့နှလုံးသားပါ….
အဲဒီနှလုံးသားဟာ…ခုတော့…..မိုးရေတစ်စက်အတွက် ဖြစ်ညှစ်ပြီးအသက်ဆက်ရတဲ့ မြက်လို အလွမ်းရက်တွေရှည်လွန်းလှချည့်ရဲ့ကွယ်….
အတိတ်မမေ့တတ်သေးဘူးဆိုရင်..အရိပ်လေးလောက်တော့ ပြေးမြင်ကြည့်စမ်းပါ…..တို့လျှောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းတွေထက်က..တို့ကောက်ခဲ့တဲ့ပန်း(ခရေ)တွေနွမ်းခြောက်သွားပေမယ့်ရနံ့မပြယ်သေးပါဘူးချစ်သူ….မေ့နေပြီလားချစ်သူ…… “ချစ်တယ်ဆိုတာမုန်းဖို့မဟုတ်ဘူး..” ဆိုတဲ့..မင်းရဲ့စကားပြန်ပြန်ကြားတိုင်း..မြစ်ကိုအလျားလိုက်ဖြတ်ကူးရသလိုပဲ…မျှော်လင့်ချက်ကမ်းကဝေးလွန်းလှတယ်ကွာ….
တစ်နေ့မတွေ့ရတာနဲ့ တမြည့်မြည့်ဆွေးရလို့ ကဗျာတွေ စာတွေကတစ်ဆင့် ရင်ဖွင့်ခဲ့ကြတာတွေ
0 comments: on "ချစ်သူထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ"